Hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi oo loo maleynayo in uu booqsho ku joogo Beijing – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaHogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi oo loo maleynayo in uu booqsho ku joogo Beijing
Hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi oo loo maleynayo in uu booqsho ku joogo Beijing
27/03/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Mar 27, 2018:- Kolonyo gawaari aan caadi ahayn ayaa lagu arkay qeybo ka mid ah caasimada Beijing, waxaana ciidamo badan oo boolis ah la geeyay Huteel ay degi jireen hogaamiyayaashii hore ee Kuuriyada Waqooyi.
Xukuumadaha Beijing iyo Pyongyang ayaan ka hadlin wararka la isla dhexmarayo, balse haddii ay dhab tahay in Kim Jong-un uu booqasho ku tegay Shiinaha, ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horaysa ee uu safar dibedda ah u baxo tan iyo intii uu xukunka la wareegay.
Booqashooyinkii uu hogaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-il, ku tegi jiray Shiinaha ayaa la shaacin jiray ka dib marka uu dalkiisa ku laabto.
Waxaa sii xoogeysanaya dadaallada diblomaasi ee ku aaddan Kuuriyada Waqooyi, ayadoo la filayo in bilaha soo socda uu Kim Jong-un kulamo la qaato madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed iyo Donald Trump-ka Maraykanka.
Dalka Shiinaha ayaa lagu tilmaamaa in uu yahay dal ay si wayn isugu dhaw yihiin dalka Kuuriyada Waqooyi.
AKHRISO:- Xilka qaadis lagu sameeyay xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan
Dowlada Australia oo ku biirtay dalalka Eryaya diblumaasiyiinta dalka Ruushka